ECONOMY Archives - Tamban RELAY
Mumwe mutambi wechidiki wekuIvorian, asina makore maviri asvika muEurope, anobudirira kuhwina ...
Marc Ouattara achiri mudiki weIvorian mumakumi matatu emakore. Aiva mubati wehove ku Abidjan uye akasara kuti ayedze iyo Europe nzwisa. Pasina makore maviri asvika muEurope, Marc akatiudza kuti akahwina sei muFrance.…
Bill Diara, weSenegalese uyo anorerutsa kushandiswa kwekufambisa kwevanhu muCôte d'Ivoire ne ...
Wanda Vanhu, akasarudza kuisa hunyanzvi hwake pakushandira vashandisi vekutakura vanhu. Chikwata cheWanda chinokutora pakuwanikwa kwaBill Diarra, muzvinabhizimusi weSenegal anogara muCôte d'Ivoire. Abdoulaye Bill Diara wezita rake ...
Charlotte Horore BELL BEBGA, mumiriri wedhijitari - CAMEROON CEO
Iye ndiye mumwe wevakadzi vari kuvaka ramangwana. Kutsunga kwake, kushinga kwake, kusasimba kwake uye kutadza kwake kuchaita iye murwi chaiye. Munda wake wekuita, akasarudza kare-kare: iyo ...
MaAlgeria pamutsara wekuparara kwetsvo nekuda kwekushayikwa kwemari - Jeune Afrique
Muna Zvita 2019, kudare reAlgiers, mumwe murume akatemera mabhenefiti panguva yekuvhurwa kwenyonganiso yehuori (mufananidzo). © RYAD KRAMDI / AFP ...
MunaSeptember 2020, Beac iri kuvheneka fomu rekukurumidzira kugadzirisa kwekuchinjiswa ...
(Bhizinesi muCameroon) - Iyo Bhangi reCentral African States (Beac), ichipa masangano enyika nhanhatu dzeCEMAC (Cameroon, Congo, Gabon, Chad, Equatorial Guinea uye…
Ivory Coast: Eudoxie Yao anozivisa pamasocial network kuti ari kutengesa lingerie yake
Eudoxie Yao arikuda mari? Chero zvazvingave, uyu ndiwo mubvunzo uyo vazhinji vanozvibvunza ivo, nekuti iyo bimbo kubva kuCote d'Ivoire yakafunga kumutengesa iye yakamboshandiswa lingerie. Mutengo wekutengesa wezvinhu izvi zvechokwadi uchave Mamiriyoni mashanu ...
Rebhanoni richapora sei?
Sangano rezvematongerwo enyika rakagadza Hassan Dhi Gurukota seRebhanoni raingogona kuwana purofiti kubva mukutadza kwake. Dhiabhu akazivikanwa kune veruzhinji nezve ...
1 2 3 ... 63 chinotevera